Talata, Jona 14, 2011 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Araka ny efa tsapanao, izahay dia manana fandaharana amin'ny radio isan-kerinandro izay mivantana isaky ny zoma amin'ny 3PM. mampiasa BlogTalkRadio, Arindra izany seho izany ary atosika any amin'ny iTunes ny podcast. Ankoatra ny kalitaon'ny feo, BlogTalkRadio dia manohy mihoatra ny andrasako.
Rehefa mikarokaroka Internet ianao momba ny torohevitra momba ny podcasting, dia misy fampahalalana marobe amin'ny rindrambaiko toy ny sahy or tarika garazy hampivelatra ny feonao, mpilalao hampidirina ao amin'ny tranokalanao, fitaovana hividianana, ary avy eo tsy maintsy mikorontana amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana sy fampakaranao podcast tsirairay amin'ny iTunes ianao. Asa be loatra ho an'ny ekipanay izany… ka BlogTalkRadio dia vahaolana tonga lafatra.
Miaraka amin'ny BlogTalkRadio, ny hany ilaintsika dia a mikrô tsara ary Skype hifandray amin'ireo vahiny… tsy mila an'ireny akory ianao, afaka miantso amin'ny telefaona fotsiny ianao dia vonona handeha! BlogTalkRadio dia mamoaka switchboard vaovao, ahafahanao mitantana mora foana ny seho ataonao, ny vahininao, ary ny audio fanampiny hoentinao. Ho fanampin'izany, BTR dia mamela anao hampifangaro ny sehoo amin'ny Facebook sy Twitter ka halefa ho azy ireo fampandrenesana mampiseho izay mankany amin'ny seho (endri-javatra mahatalanjona).
Amin'ny maha seho B2B anay, ny tetikadinay dia tsy mitovy amin'ny fampisehoana mifandraika amin'ny mpanjifa:
Tsy manaraka mpihaino marobe izahay… te hampitombo ny mpihaino ny matihanina amin'ny varotra sy ny indostria.
Izahay dia manenjika ireo mpitarika marketing sy teknolojia hifandraisany amin'ilay seho. Tsy tetika fotsiny ny fananana anarana be ao amin'ilay seho ho an'ny mpihaino bebe kokoa, paikady iray ihany koa izy io hahazoana antoka fa voatonona hatrany amin'ireo anaranay ireo.
Manenjika ireo matihanina amin'ny varotra miasa amin'ny orinasa lehibe izahay. Raha atao teny hafa, dia mikendry ireo mpanjifa mety ho eo amin'ny seho izahay! Mety ho toa ratsy toetra izany, nefa tena mandeha tokoa. Hanohy hitondra mpitarika ny tsena sy orinasa Fortune 500 izahay amin'ny fampisehoana. Samy sarobidy amin'ny mpihaino izy ireo ary koa manolotra antsika ny fotoana hampahafantatra izay ataonay amin'izy ireo.
Satria tsy mora ny podcasting, maro ny mpanoratra, bilaogera ary mpitarika indostrialy no hitsambikina amin'ny fotoana azo anaovana fampisehoana. Tsy dia misy podcast firy ao toy ny misy bilaogy… noho izany dia avo kokoa noho izany ny mety ho re. Tombontsoa ho azy ireo (sy ny anao) ny mandeha amin'ireo seho ireo.
Izany dia nilaza… tsy misintona olona iray amin'ilay seho izahay mba hivarotra azy ireo mafy. Manome azy ireo mpanatrika izahay hampiroborobo ny tenany, ny orinasan'izy ireo ary ny paikadin'izy ireo ary koa manome torohevitra na resaka momba izany. Raha mankasitraka ny valinteninay ny vahiny, dia misy foana ny fotoana mety hanohizana ny fifandraisana ivelan'ny Internet.
Izahay dia mamantatra ny kendrena amin'ny Podcast amin'ny:
Manome taratasy fifandraisana amin'ny bilaoginay. Ny matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe dia mifandray aminay isan'andro miaraka amina paozy - maro amin'izy ireo no fotoana mety hanaovana fampisehoana.
Mitadiava bilaogera amin'ny alàlan'ny fikarohana ao amin'ny bilaogy, PostRank ary Technorati izay miresaka amin'ny lohahevitra iray ihany.
Mitadiava Podcasters hafa amin'ny programa toa iTunes ary Stitcher.
Mitadiava mpanoratra amin'ny boky vao navoaka momba ny lohahevitra resahinay. Miezaka hatrany ny mpanoratra hamoaka ny teny ao amin'ny bokin'izy ireo ary manome Podcasts fotoana lehibe. Ny ankamaroan'ny mpanoratra dia hitsambikina amin'ny fotoana mety. Tadiavo ny tranonkalany ary mifandraisa amin'izy ireo.
Mandrosoa ny seho amin'ny mampiditra ny seho radio amin'ny bilaoginao ary pejy sosialy. Podcasts dia manolotra fotoana lehibe ahafahan'ny olona miasa sy mihaino… zavatra tsy atolotry ny bilaogy. mihaino dingana lehibe ihany koa amin'ny famakiana… satria henonao ny feon'ny feo. Izy io dia afaka manampy ny mpihaino anao hiorina matoky anao haingana kokoa.
15 Jiona 2011 à 9:35
Tiavo ny fampisehoanao, tsy afaka misintona mivantana azy foana, noho izany dia mahafinaritra ny misintona ny podcasts, ary mihaino rehefa manam-potoana aho.
Efa elaela aho no nanao podcast tamin'ny alalan'ny firaketana an-tanana sy ny Audacity, saingy mora kokoa ny Radio BlogTalk. Mbola manova ny programa farany aho alohan'ny hampidirana azy ao amin'ny iTunes ary nanomboka nampiditra rohy mankany amin'ireo programa malaza kokoa amin'ny soso-kevitray aho.
Hianatra avy aminao izahay rehefa miezaka manangana mpihaino ho an'ny fandaharan'asan'ny orinasa madinika ataonay ny alarobia amin'ny 10:30.